Mhemberero yekuvhura yeMersen Zhejiang Co., Ltd. yakaitwa munaNovember 5th masikati. The Deputy Secretary uye County Chief weChangxing County Yiting Shi vakapa hurukuro. Mukutaura kwake, Yiting Shi akati kukura kwaChangxing kunogara kuchida shumba yekutamba, ine fu ...
Yuliao nzvimbo dzinoyevedza dzinowanikwa muYuliao, Mazhan Town, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweCangnan County, Zhejiang Province. Kumabvazuva kwaro kwakatarisana negungwa, uye maodzanyemba ari padyo neguta reXiaguan, zvakare kuchamhembe kwakavharwa kuguta reChixi, ukuwo kumadokero kunosvika kudhorobha reMazhan. Iyo inovhara 18.5 mativi ki ...
Mersen anokunda zita rekuremekedza reCSR (yemagariro mutoro wemagariro) mu2020
Mersen anga aine chekuita nevatengi, nharaunda uye nharaunda achigadzira purofiti uye achitora zviri pamutemo mabasa kune vagovana nevashandi. Isu tinotenda kuti iro rezvemagariro mutoro wemabhizinesi rinoda kuti mabhizinesi apfuure kupfuura yechinyakare pfungwa yekutora profi ...
Kuti tisimbise ruzivo rwevashandi vese nezvekuchengetedza moto, uye nekuvandudza hunyanzvi hwavo mukudzivirira moto uye kuyamura njodzi, zvakare kudzivirira tsaona mubhudhi, isu takabudirira kubata chibhorani chemoto mangwanani a Gumiguru 9, 2020, inova imwe mwedzi pamberi pekuchengetedza moto kwenyika ...